I-china i-SHEHWA-360-DTH yokwahlulahlula okunyusiweyo kumgangatho ophezulu we-hydraulic down-the-hole-hole umenzi womvelisi kunye noMthengisi | Xuanhua
I-SHEHWA-360-DTH eqhekeziweyo eqwengayo inyusa umphezulu we-hydraulic ezantsi-emngxunyeni wokugrumba
I-SHEHWA-360-DTH rig isetyenziswa ngokubanzi kwimigodi evulekileyo efana nesamente, isinyithi, imigodi yamalahle, iikwari, ukuqhuma imingxunya kuloliwe, kuhola wendlela, kulondolozo lwamanzi, kumandla ombane kunye neeprojekthi zokwakha ukhuseleko kuzwelonke.
Umrhwebi otyhidiweyo onyuse umphezulu we-hydraulic ezantsi-emngxunyeni wokumba
I-SHEHWA-360-DTH rigs isetyenziswa ngokubanzi kwimigodi evulekileyo enje ngesamente, isinyithi, imigodi yamalahle, iikwari, ukuqhuma imingxunya kuloliwe, kuhola wendlela, kulondolozo lwamanzi, kumandla ombane kunye neeprojekthi zokwakha ukhuseleko kuzwelonke. Ubungakanani bomngxunya wayo wobubanzi be-90-1152mm, enokuxhotyiswa ngeentlobo ezahlukeneyo ze-compressors zomoya ukuze kuqinisekiswe ukubhola koxinzelelo lwe-DTH.
1. Ukukwazi ukulayisha ngaphandle
Umzimba wesakhelo uyilelwe ngesixhobo se-gravity shaft, esinciphisa ukungqubana xa usuhamba, siphucula ukuqina konxibelelwano phakathi komzimba kunye nomkhondo, kwaye senze i-chassis ye-rig yokomba yomelele kwaye izinzile. Xa uwela ithambeka, kwaye ukunyuka ubude kunokufikelela kwiidigri ezingama-35.
2. Ukunciphisa iRotary
Isinxibelelanisi samazinyo esithe tye sinokunyuka okuphantsi kobushushu, ukuthwala umthwalo kunye nobomi benkonzo ende, enokuhlengahlengisa isantya sokujikeleza ngokungqinelana nelitye. Intloko ejikelezayo ixhotyiswe nge-Eton hydraulic motor ukufezekisa imeko yomsebenzi ozinzileyo. Ixhotyiswe ngokuqiniswa kokudityaniswa kokudanjiswa ukunciphisa amandla okuphendula kwimingxunya yokomba ukonakalisa isinciphisi esijikelezayo.
3. Isixhobo sokususa uthuli
Umqokeleli uthuli wamkela itekhnoloji yokunyanzeliswa kokucoca uthuli, olunamandla okucoca uthuli, ukusebenza kakuhle kokususa uthuli, uxinizelelo oluninzi lokungcola, inqanaba lokuvuza lomoya ophantsi, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo, nokukhusela impilo yabaqhubi. Ngezinto ezikumgangatho ophezulu wokucoca ulwelo, ukusebenza kokususa uthuli kunye nobomi benkonzo buqinisekisiwe.
● IMIQATHANGO ENGUNDOQO
Umngxuma wokugrumba ubukhulu 90-152mm
Uxinzelelo lomoya oSebenzayo 1.38-2.46 MPA
Ukujika kwetorque Ngo-1970
Isantya sokujika 0-100Rpm
Ukuphakamisa amandla 20KN
Isilayidi esityibilikayo ujingi Ekhohlo 53 ° / Ekunene 35 °
Ukutyibilika isakhelo isiseko I-180 °
Ukugrumba boom ujingi Ekhohlo / Ekunene 45
Drilling boom wamisa tyaba 25 ° / 60 °
Amandla eBakala 35 °
Umenzi weeNjini YUCHAI Idizili njl
Amandla alinganisiweyo Ngama-56/70 Kw
Egqithileyo I-TY320-3 Bulldozer
Okulandelayo: I-SHEHWA-370-DTH eqhekeziweyo eqweqwe inyuselwa umphezulu we-hydraulic ezantsi-emngxunyeni wokugrumba
Imitshini yeMigodi yamalahle
Oomatshini abanzima bemigodi
Imitshini yeMigodi yeHlabathi
Iinkampani zooMatshini baseMayini
Oomatshini bokuGaya iMartless
I-SHEHWA T45 i-Hydraulic ephezulu ye-Hammer Surface ...
I-SHEHWA-380-DTH ye-Pneumatic Drilling Rig